Ukufakelwa kwesicelo sokufudumeza sentwasahlobo ngesifudumezi esishushu sangaphakathi
Isixhobo se Ukukhupha nzima Intwasahlobo ene-helical okanye i-beehive shape. Izixhobo zinenkqubo yenkxaso yokujikeleza kunye nenkqubo yokufudumeza ngaphakathi. Inkqubo yenkxaso yokujikeleza yenzelwe ukuxhasa intwasahlobo ngelixa intwasahlobo ishushu ngenkqubo yokufudumeza induction. Inkqubo ye- inkqubo yokufudumala ine-coil ye-induction ene-coil system. Inkqubo yekhoyili inommandla ohlukanisiweyo oyilelwe ukufumana intwasahlobo kunye nokufudumeza intwasahlobo ngelixa intwasahlobo ixhaswa kwinkqubo yenkxaso yokujikeleza.
Imithombo yekhoyili okanye imithombo yamagqabi yenziwa kukususwa kobushushu kweeprofayili zentsimbi. Ngenxa yeempawu zentsimbi yasentwasahlobo, kukho iimfuno ezithile zokufudumeza ubushushu kunye nexesha lenkqubo yokufudumeza. Ngaphandle kokufudumeza ngaphambi kokuqengqeleka kwiikhoyili zasentwasahlobo okanye ekubumbeni umatshini kwimithombo yamagqabi, kukwakho nezinye izicelo zonyango olwahlukileyo lobushushu, ezinje ngentambo yentwasahlobo yokubamba intambo, kunye nolawulo lwendawo yentsimbi yokuqinisa. Ukuba neempawu zokufudumeza ngokukhawuleza, ukuvala ngokukhawuleza, ulawulo oluchanekileyo lokuphuma kwamandla, kunye nokwahluka kwamanqanaba okuhamba, ii-HLQ's ukunikezelwa kwamandla okushisa ilungele kakhulu ukufudumeza okushushu kwentsimbi yentsimbi yasentwasahlobo, ngakumbi kwicandelo lezinto ezizenzekelayo ezibandakanya imithombo yamagqabi okanye izityalo zemveliso zentwasahlobo. Eyilwe ziingcali kwi-HLQ, yethu izixhobo zokufudumeza ungeno Zonke zixhotyiswe kakuhle ngezibonelelo zokonga umbane, ukuqala / ukumisa ngokukhawuleza, ixesha lomsebenzi weeyure ezingama-24, indawo yamandla aphezulu, ukuzenzekelayo, ukusebenza ngokukuko, ulondolozo olulula, kunye nobomi obude bokusebenzisa Iifudumezi zethu zokungeniswa ziye zamkelwa ngokubanzi ngabathengi kwimveliso yentsimbi yasentwasahlobo.
Inkqubo yokuqiniswa kwesinyithi yinkqubo esemgangathweni esetyenziselwa ukuvelisa intwasahlobo. Inkqubo enye yokuqaqadeka iqulathe isithando somlilo sendalo. Ezo nkqubo zokuqina zihamba kancinci. Imithombo inokwenziwa kwizinto ezahlukeneyo zesinyithi (umzekelo, intsimbi engenasici, intsimbi yekhabhoni, intsimbi yentsimbi, njl. Xa isinyithi sentwasahlobo siqiniswe kakuhle kwaye sinobushushu, iiparameter ezithile zentsimbi ezinje ngobulukhuni kunye nolwakhiwo oluncinci zinokufikelelwa.
Xa intwasahlobo iqina ngesithando somhlaba esiqhelekileyo, intwasahlobo ibekwa kuqala kwi-oveni ebekwe kubushushu obuthile kangangexesha elithile. Emva koko, intwasahlobo iyasuswa icinywe kwioyile okanye ngolunye ulwelo olucimayo. Emva kwale nkqubo yokuqaqadeka kokuqala, ubulukhuni basentwasahlobo ngokubanzi buphezulu kunokuba ubufuna. Kananjalo, intwasahlobo ihlala iphantsi kwenkqubo yokubila de kube sentwasahlobo ifumana iipropathi zomzimba ezifunekayo. Xa intwasahlobo iqhutywa ngokufanelekileyo, ezinye zeekristalline zentsimbi ziyatshintshwa zenziwe i-martensite enobushushu kunye neninzi yee-carbide ezinyibilikileyo ukubonelela ngesakhiwo esifunekayo sentwasahlobo kunye nobulukhuni bomhlaba obunqwenelekayo bentwasahlobo.
Enye inkqubo esetyenziselwa ukwenza lukhuni imithombo yile lokutshisa. Inkqubo yokufudumeza induction yenzeka ngokunyanzela umhlaba ukuba usebenze ngombane kwizixhobo eziqhutywa ngentwasahlobo. Imijelo ye-Eddy iveliswa ngaphakathi kwezinto ezihamba noxhathiso olukhokelela kufudumezo lweJoule. Ukufudumeza i-induction kunokusetyenziselwa ukufudumeza intsimbi kwindawo yayo yokunyibilika ukuba kukho imfuneko engaphezulu kokwanela ukwenza imveliso ibe yeyoqobo.
Inkqubo yokufudumeza induction inokubonelela ngokukhawuleza ngexesha lokujikeleza ukufudumeza kunokufudumeza ngomlilo wendalo, kunye nenkqubo yokufudumeza induction inokwenza lula ukuphathwa kwemithombo, kwaye inokubangela ukuba izinto ezizenzekelayo ziphathe intwasahlobo kwinkqubo yokuqina. Nangona ukufudumeza ngokungeniswa kunezibonelelo ezininzi ngaphezulu kweefanitshala zemozulu zemveli, ukufudumeza ukufudumeza kwemithombo kunengxaki ngokutshisa ngokulinganayo intwasahlobo kubo bonke ubude basentwasahlobo, ukufudumeza iziphelo zentwasahlobo, kunye nokugcina i-coil coil ukusebenza kakuhle.
iindidi Teknoloji tags thenga isifudumezi sentwasahlobo, ukuqina kobushushu entwasahlobo, izixhobo zokufudumeza ungeno, ukutshisa ukushisa kwentwasahlobo, Ukuchithwa kwentwasahlobo, induction spring heater, ukufudumeza kwentwasahlobo, isinyithi sentsimbi yokungenisa ubushushu, ukuqina kwentwasahlobo, ukufudumeza kwentwasahlobo, umphezulu wokomisa intwasahlobo Post yokukhangela